Akany Rasoamanarivo : nanokatra toeram-pitsaboana ny mpianatry ny Inscae | NewsMada
Akany Rasoamanarivo : nanokatra toeram-pitsaboana ny mpianatry ny Inscae
Andrakitra tsy maintsy ataon’ny mpianatra rehetra ao amin’ny INSCAE ny manampy ny mpiara-belona mandritra ny fianarana atao. Samy misafidy ny toerana hanatanterahana izany ny vondrona rehetra. Ny akany Rasoamanarivo no niantefan’ny hetsiky ny mpianatra Hope misy mpianatra 10.
Nisafidy ny hanampy ny toeram-pandraisana zaza kamboty, voatery nesorina teny amin’ny fianakaviany, narian’ny ray aman-dreny, mitondra ny anarana akany Rasoamanarivo eny Andoharanofotsy, ny mpianatra taona faharoa eny amin’ny Inscae mivondrona ao amin’ny Hope (Help Offer Play Educate). Napetraka ao amin’ny akany ny ankamaroan’ny zaza enim-bolana ka hatramin’ny 13 taona taorian’ny fanapahan-kevitry ny mpitsara manokana ny zaza. Navadika ho toeram-pitsaboana ao anatin’ny akany ny efitrano iray ka nanampy amin’ny fampitaovana sy ny fanafody ary ny fanaka ny mpianatra. Nanohana azy ireo ny farmasia Métropole Antaninarenina sy ny mpiasan’ny Prosperer ary ny ray aman-drenin’izy ireo avy. Afaka manome fitsaboana vony aina ny toeram-pitsaboana. Nitondra akanjo, kilalao sy sakafo ho an’ireo ankizy beazina ao ny tanoran’ny Hope, omaly teny Andoharanofotsy.
Efa niorina nanomboka ny taona 1992 ny akany ary mandray ankizy hatramin’ny 100 fa ireo 20 mahery ihany no matory sy misakafo ao an-toerana. Ny sisa mody any amin’ny fianakaviana isan’andro. Amin’ireo ankizy 20 kilasy mandry ao, misy telovavy iray tampo niharan’ny fanolanana nataon’ny ray niteraka azy ireo, tao ny narian’ny reniny…
Nanomboka ny taona 2009, tsy nahazo tohana ara-tsakafo avy amin’ny Pam intsony ny akany, izay mivelona tanteraka amin’ny fanampiana omen’ny malala-tanana maro.